Akwụkwọ Ahịa m nke Afọ | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 9, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọnwa ole na ole gara aga, a jụrụ m ma m ga-agụ akwụkwọ zuru oke nke ahịa site n'aka James Connor. Abụ m ọkpọ maka a akwụkwọ ahịa ya mere azaghachiri m ozugbo. Anaghị m emegharị m n'echiche m, dịka ị ga-ahụ nke m nyocha nke Ọdịnaya bara ụba.
Onye mgbasa ozi James Connor ziteere m akwụkwọ ọ bụla. 😉
Ọ ga-abụrịrị na ọ ma na ọ bụ onye mmeri! Mgbe m gụsịrị akwụkwọ ahụ, enwere m obi anụrị na m rịọrọ igbe nke akwụkwọ ndị ahụ ma ana m enye ha ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ. Ruo ugbu a, azịza ya bụ otu olu - nke a bụ nke m Akwụkwọ Ahịa nke Afọ!
James were oge n'izu gara aga, m wee gbaa ya ajụjụ ọnụ na ekwentị. Ọ dị nwayọ ma nwee amara na oge ya. Ekwenyeghi m na o juru ya anya na mmeghachi omume na akwụkwọ - nke a bụ James Otu si akwụkwọ ọgụgụ. The James Group bụ ụdị atụmatụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa zuru oke wuru iji nyere aka azụmaahịa etiti. Ma na-eto eto ha nwere, na a 95% ịga nke ọma ọnụego ọ bụghị otu onye ahịa na-ata ahụhụ n'oge ndalata a.
Akwụkwọ ahụ abụghị echiche, ọ bụghị onye isi echiche chere ya.… Otu James jiri afọ 6 nwalee na afọ isii na-azụ usoro ndị a. James kwuru na akwụkwọ ahụ dị mfe ide n'ihi na ọ bụ otu ha si eso ndị ahịa ha arụ ọrụ kwa ụbọchị.
Enwere ọtụtụ ihe mere m ji hụ akwụkwọ a n'anya nke ukwuu, gụnyere:
Ọ bụ ihe eziokwu na usoro nhazi, edere maka onye isi ala - ọ bụghị CMO!
Edere akwụkwọ ahụ dịka akụkọ sitere na onye ndụmọdụ nye onye isi ala, onye isi oche bụ mkpokọta nke otu narị otu narị ndị isi azụmaahịa nke James rụkọrọ ọrụ na afọ niile.
Isi nke ọ bụla nwere nkọwa na ajụjụ maka onye na-agụ ya, na-aghọ ihe nduzi bara uru maka onye ndu ọ bụla na-azụ ahịa iji mụta ins na outs of marketing.
Akwụkwọ a bụ ihe dị mfe ọgụgụ, mana ọ na-ekwu okwu n'akụkụ niile nke azụmaahịa - site na akara ngosi na akara ahịa SEO na imewe weebụ.
Akwụkwọ nkọwapụta akwụkwọ lọghachi na ntinye ego nke azụmaahịa - ihe dị m nso na ọ masịrị m!
James Connor nwere obi uto banyere akwukwo a - ma kwuo okwu banyere nsogbu itolite azụmaahịa na-eto eto nwere ike idozi nlọghachi azụ:
Ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ a na-akwụghị ụgwọ, rịọ otu site na mpempe akwụkwọ ịkpọtụrụ m yana nkọwa ụfọdụ gbasara onye ị bụ, blọgụ ahịa gị (chọrọ) yana gịnị kpatara ị ga-achọ nnomi. Aga m ezitere gị otu otu ma ọ bụrụhaala na ị kwere nkwa ịde blọgụ gbasara ya mgbe ị gụsịrị akwụkwọ ahụ. Enwere m naanị mkpụrụ pere mpe - yabụ gbaa mbọ mee ya ngwa ngwa. Y’oburu na ahoro gi, aga m edeghachi were juo adreesi ka iziga ya.
Echefula, ị nwere ike ibudata isi 4 mbụ site na izu oke nke weebụsaịtị weebụsaịtị… ma ị nwere ike ịzụta akwụkwọ na nhazi nke 3 maka ọnụahịa nke 1.
Ekele pụrụ iche nye James maka iwepụta oge site na oge ọrụ ya iji gwa m okwu.
Tags: ite ntụpọegemonitorna-ekwu okwunleleWordPresswukong
Feb 10, 2009 n’elekere 3:09 nke abali
Ekwenyere m na nke a bụ nnukwu akwụkwọ, Doug. Dị ka a na-ere ahịa ndụ, ika ahịa ka mgbe m yiri ka a nwa art, na-agbagwoju anya na-ekpuchi ihe omimi. Conzọ James Connor si eme ihe ziri ezi. Echeghị m na m enwetatụla ihe ọmụma bara uru site na akwụkwọ azụmahịa na obere ịgụ.
Feb 10, 2009 n’elekere 10:23 nke abali
VP nke ahia nyere m akwukwo a dika onyinye. Agụrụ m na ụgbọ elu na-aga ma na-esi NYC n'izu gara aga. N'ikwu eziokwu, izu oke ahia bụ akwụkwọ azụmaahịa mbụ m gụrụ "dị ka akwụkwọ". Enwere akụkọ zuru ezu ebe ahụ iji mee ka ị nwee mmasị na ya, ọ na-emekwa gị onye nzuzu ịmụ ụfọdụ ihe mmụta bara uru. Ezi ihe.